Imwe yehondo dzese dzandinorwira nemakambani kumira kufunga nezvazvo zvavanoita uye tanga kufunga nezvazvo nei vanhu vachishandisa chigadzirwa kana sevhisi. Ini ndinokupa iwe inokurumidza muenzaniso… zuva nezuva, iwe uchandiwana ini ndichirekodha nekugadzirisa podcast, kunyora yekubatanidza kodhi, kushandisa yechitatu-bato mhinduro, uye kudzidzisa vatengi vangu. Blah, blah, blah… ndosaka vanhu vachibata masevhisi angu. Ivo vanogona kuwana chero eaya masevhisi kuenderera Fiverr kwemazana zana emari basa. Vatengi vangu vanondiroja nekuti ini ndinokwanisa kushandura yavo yekushambadzira edhijitari uye nekukura mhedzisiro yavo zvakanyanya kune yakaderera mari
Zvinonzwika zviri nyore, handiti? Kwete… nekuti makambani anofunga kuti arikutenga shanduko yemafuta asi ivo chavanoda chete kukunda mujaho.
Pro Tip: Usati waenderera kumberi neiko iwe unofunga ndiyo yako yakasarudzika Kukosha Chirevo… bvunza ako ikozvino vatengi kana vatengi! Unogona kushamisika kuti hazvisi izvo zvaunotenda chaizvo kuti ndizvo.
Inofanira kusiyanisa iwe kubva kumakwikwi ako online. Kana yako runyorwa rwekukosha zvirevo zvakafanana nevakwikwidzi vako, tarisa pane iyo yavasina kutarisisa. Mumuenzaniso wangu, isu hatisi agency yakanangana necheni imwe chete, hunyanzvi hwangu hunogadzira huwandu hwetekinoroji nemazano kuitira kuti ndikwanise kuraira vatungamiriri vebhizimusi maitiro ekuvandudza bhizinesi ravo vachiri kutaurirana nezvavanowana pamaitirwo acho.
Inofanirwa kuve inokwezva zvakakwana kuti inyatso fambisa sarudzo yemutengi. Muenzaniso: Tinopa zuva makumi matatu kunze kwevatsigiri vedu sezvo isu tichitenda mukukosha kwedu uye tichida kuve nechokwadi chedu mutengi kubudirira.
Mushure mekusarudza yakasarudzika kukosha chirevo, iwe unofanirwa kutaurirana icho mukati uye zvinogara uchichipinza mune yega yekutengesa uye yekushambadzira meseji iwe yauri kuendesa.
Mumwe muenzaniso wakanaka ndeye Lifeline Data Centres, a midwest colocation chivako uye mutengi wedu. Ivo vane yakawanda nzvimbo yekuyera kupfuura chero mumwe mukwikwidzi muMidwest. Ivo vanopupurirwa kune federal yepamusoro zvakavanzika data. Uye… parizvino vari kuvaka hofisi nzvimbo muzvivakwa zvavo. Iko kusanganiswa kwakasarudzika zvekuti tiri kushanda navo pa saiti uye brand redesign izvo zvichazadza zvizere mutsauko!
UVP yako inogona kusatungamira mukumiswazve… asi zvinofanirwa kuve pachena kubva pawebhusaiti, pasocial, uye nekuvapo kwekutsvaga izvo kukosha kwako chirevo! Heano akakura infographic kubva ku QuickSprout, Maitiro Ekunyora Kwakakura Kukosha Chirevo.
Uyu musoro wenyaya wakakosha. Ini ndinofunga vanhu vazhinji vanofunga kuti vanonzwisisa UVP, asi vari kuivhiringidza neshoko rehumishinari. Basa rakanaka, Douglas.